Ungayibuyekeza kanjani iMacOS Mojave | Ngivela kwa-mac
Uhlobo lokugcina lwe-MacOS Mojave selivele likhona phakathi kwethu, inguqulo entsha esisinikeza njengeyona nto entsha itimu emnyama, ingqikithi emnyama esingayisebenzisa futhi siyenze isebenze ngokuya ngezidingo zethu. Okunye okusha kutholakala kunketho esivumela ukuthi sibeke wonke amadokhumenti efomethi efanayo kudeskithophu yekhompyutha yethu.
Okusha, okungashayela okungaphezu kokukodwa kokuhlanya, kungukuvuselelwa kohlelo. Ngokuvuselelwa kweMac App Store, izibuyekezo zesistimu azisatholakali esitolo se-Apple app. Nge-MacOS Mojave, ukuvuselela uhlelo, kufanele siye kokuncamelayo kwesistimu.
Ngokuya nge-hard disk esinayo imishini yethu (i-HDD noma i-SSD), isikhathi sokufakwa kwezibuyekezo kungathatha impilo yonke noma imizuzu nje embalwaNgakho-ke, sihlala sikhetha ukuzenza uma sazi ukuthi ngeke sisebenzise imishini yethu, ikakhulukazi uma iphethwe yi-mechanical hard drive.
Ukuvuselela iMacOS Mojave, njalo lapho i-Apple ikhipha isibuyekezo esisha, kufanele siqale siye ku- Izintandokazi zesistimu.
Bese uchofoza ku Ukuvuselelwa kweSoftware.
Okulandelayo, kuzokhonjiswa iwindi lisazisa uma sinokuvuselelwa okusha esizokufaka. Uma kunjalo, izosinikeza inketho Buyekeza manje. Ngaleso sikhathi, kuzoboniswa ubukhulu besibuyekezo nesikhathi esilindelekile sokulanda, isikhathi esizoya ngejubane lethu le-Intanethi.
Njengoba ngishilo ngenhla, uma iMac yethu iphethwe yi-mechanical hard drive, akunconywa ukuhlola ibhokisi Gcina i-Mac yakho isesikhathini ngokuzenzakalela, nokuthi iqembu lizoba nesibopho sokulanda nokufaka izibuyekezo noma nini lapho kutholakala khona, noma ngabe siyalidinga iqembu elisebenzayo noma cha.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayibuyekeza kanjani iMacOS Mojave
Ungayisebenzisa kanjani imodi emnyama ku-MacOS Mojave